Sagaal boqol qof oo boko haram si xoog ah looga furtey halka boqol dagaalyahana ay ka dileen ciidamada dalka Camaroon. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home facebook.com Sagaal boqol qof oo boko haram si xoog ah looga furtey halka...
Ciidamada dalka Cameron ayaa si awood ah kaga soo furtay kooxda Boko Haram ee Nigeria, kaddib howlgal ay ku dileen in ka badan 100-xubnood oo kooxdan Islaamiyiinta ah ka tirsan, sida ay shalay oo Arbaco ahayd shaacisay wasaaradda gaashaandhigga waddanka Cameroon.
“Millateriga Cameroon waxay howlgal gaar ahaa oo socday intii u dhexeysa 26-kii – 28-kii bishii hore ee November, kaasoo ka dhan ahaa kooxda Boko Haram ee ku sugan xadka aan la wadaagno dalka Nigeria waxaa lagu dilay howl-galka boqol dagaalyahanada kooxda ah, waxaana looga sii-daayay 900 oo qof oo ay afduub ku haysteen,” ayaa lagu yiri warbixinta wasaaradda gaashaandhigga Cameroon.
Previous articleSaldhig ay leeyihiin dhaq dhaqaaqa AL-shabaab oo xaley duqeyn xaga cirka ah loo geystey.
Next articleFashil ku yimid heshiiskii colaada G/kacyo oo loo aaneeyey daacad darro dhinaca C/weli Gaas iyo qaar kamid ah madaxda PUNTLAND.